काठमाडौँ । उनी चैत ६ गते आफुलाई लागेको रोगबाट मुक्ति पाउन उनी बीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पुगेकी थिइन । अस्पतालको आग्रहमा उनी त्यसै दिन भर्ना भइन । बाग्लुङ मिसी गाबिस १ की ६० वर्षिया जयकला घर्तीमगरलाई केहीदिनमा रोग निको हुने तर अप्रेसन गर्नुपर्ने अस्पतालले बताएको थियो । जीवन सजिलै जिउने आशामा उनी मख्ख थिइन । तर जब अस्पतालले रोग निको पार्न पैसाको माग गरेपछि भने उनको सात्तो गयो । गम्भिर खालको अप्रेसन भएको भन्दै अस्पतालले तीन लाख रुपियाँ लाग्ने बतायो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी उनको सात्तो गयो । जीवन बचाउन अस्पताल पुगेकी घर्तीमगरले अन्ततः उनले अस्पताल परिसरमा नै मृत्युको बाटो रोजिन । वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरले अप्रेशनका लागि तीन लाख रकम मागेपछी एक बृद्धाले अस्पतालमै झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छिन । सर्वसाधारण जनताले सस्तोमा उपचार पाउने भनिएको वीर अस्पतालमा रकम अभावका कारण उपचार हुन नसकेपछी बाग्लुङ मिसी गाबिस १ की ६० वर्षिया जयकला घर्ती मगरले आत्महत्या गरेकी हुन ।
यही चैत्र ६ गते ढाडको उपचारका लागि भर्ना भएकी उनले बिहिबार बिहान पाँच बजेर बिस मिनेटमा अस्पतालको पाँचौँ तलाको झ्यालमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरी जवान खड्ग गौतमले नेपालपाटीलाई बताए । उनले आत्महत्याको कारण भने अहिलेसम्म खुलिनसकेको जानकारी दिए । तर उपचार गर्न पैसा नभएको भन्दै केहीदिनदेखि उनी तनावमा थिइन ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाकी घर्तीले अप्रेशनका लागि पैसा नभएपछी आत्महत्याको बाटो रोजेको उनका भतिजाले दावी गरे । ट्रमा सेन्टरको बेड नं. ५३३ मा उपचाररत मिसी १ बाग्लुङकी घर्तिमगरले बिहानै आत्महत्याको बाटो रोजेकी हुन् । अस्पताल प्रशासनले भने यसलाई दुर्घटनाका रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।
More in this category: « प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएृको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तीन हप्ते अल्टिमेटम	औषधि एकाधिकार लाध्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध पिईएन(PEAN )आन्दोलनमा »